Maitiro ekuvharira zvirevo muKunyora kunyorera | IPhone nhau
Maitiro ekuvharira zvirevo muApp Notes
Chimwe chezvinhu zvitsva zveIOS 9.3 hapana munhu akada kuchishaya hanya, takataura nezve chiitiko chandakanga ndanzwa nevazhinji vashandisi veApple yakazara kudiwa, isu tinoreva kune avo, pamusoro pekuwana zvakanyanya kubva kumaPads avo uye maPhones, zvakare kuva neMac OS. Uye ndezvekuti isu tanga tichizviziva kwenguva yakareba nekuda kwekuti isu tinoshandisa mabetas eanotevera emhando dzeshanduro dzeIOS kukuchengeta iwe uchigara uchiziva kusvika pakuneta, asi mukana wekuvharira zvirevo muKushanda kweManyorero inonakidza. Nekudaro, sekungogara uine izvi zvitsva maficha, kune avo vasingazive mashandisiro avo kana vasingazive maitiro ekuwana zvakanyanya kubva mairi. Nekuti, MuPadad Nhau isu taida kukuunzira vhidhiyo uye nhanho-nhanho tutidziro yekuti ungavharira sei zvirevo muApplication application, zvese zveOS X, pamwe neIOS uye iCloud.
1 Kukiya nekuvhura manotsi pane iOS
2 Kukiya uye Kuzarura Mazano muMac OS X - El Capitan
3 Kiinura manotsi paICloud.com
Kukiya nekuvhura manotsi pane iOS
Pakutanga, kuvharira manotsi mukati meiyo iOS Notes application zviri nyore kwazvo kupfuura zvatingafunge, isu tinongofanirwa kutanga kunyora tsamba, sezvatagara tichiita. Kana tangopedza chinyorwa chedu, tichaona kuti hapana chikamu chinooneka chinotitendera kuti chidzivise, muchokwadi Apple yakafunga kuiviga zvishoma. Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti isu tirege kubuda mutsamba, nekuti kodhi kana kuvharira kweTouchID kunoitwa kubva mukati. Tichadzvanya pane bhatani re «share» rinoonekwa mukona yekumusoro kurudyi uye menyu yezvinyorwa ichavhura, mariri tinowana "lock noti" inoshanda padhuze nekopi uye pazasi pemashandisirwo atinowanzo shandisa kugovana zvirimo.
Kana tangodzvanya pane block, inotibvunza kana tichida kuisa kodhi kana iyo TouchID, uye isu tinosiya izvi kusarudzo yeumwe neumwe, zvisinei, yeuka kuti muMac OS X uye muICloud.com hazviite shandisa iyo TouchID saka uchafanirwa kushandisa makodhi ako ekuchengetedza.
Kuvhura iwo maitiro acho ari nyore, iko kunyorera kuchatimaka nekadiki padiki iwo manotsi akavharirwa. Iyo inokiya inogona kuvhurika kana kuvharwa, kana iri yakavhurwa zvinoreva kuti isu tavhura imwe, saka mamwe ese anovhurwa otomatiki, kana akavharwa, kana uchidzvanya pane yakanyorwa yakavharwa, haikumbire kodhi yekuvhura kana Kusimbiswa kubva kuTouchID. Kurumidza uye nyore iyi nzira yakasarudzwa neApple kuita kuti hupenyu hwedu huve nyore uye huchengeteke.
Kukiya uye Kuzarura Mazano muMac OS X - El Capitan
Muvhidhiyo iriwo musoro weichi chikamu, ini ndaida kukuratidza nhanho nhanho maitiro ekuvharira nekuvhura manotsi munzvimbo nhatu dzinobvumirwa neApple, ndiko kuti, Mac OS X - El Capitan, iOS uye iCloud.com Izvo zvakakosha kuyeuka kuti kana isu tisina zvese zvishandiso zvakagadziridzwa kune yazvino vhezheni, isu hatizokwanisa kuona iwo akavharwa manotsi.
MuOS X - El Capitan ingangoita sezviri nyore senge muIOS, kamwe zvakare diki rakavharwa kana rakavhurika padiki rinoratidza kuwanikwa kwechinyorwa. Kana isina iyo inokiya, haina kungokiyiwa. Kana tikakwanisa kuwana noti yakavharidzirwa, tichaona kuti panofanirwa kunge paine zvinyorwa zvetsamba, tichawana «Tsamba iyi yakavharwa, pinda pasiwedhi kuti utarise katsamba aka»Uye pazasi pebhokisi remavara, pano tinofanirwa kuisa kodhi yatakakiya Mac Mac yedu kana yekutanga kodhi kodhi yatakasarudza kushandisa kukiya manotsi. Zviripachena, mukana wekuvhura neTouch ID haizoonekwe.
Sapakutanga, kana tangovhura katsamba, ese akavhurwa, asi mune yepamusoro sarudzo menyu, mukati mewindows application windows, tinowana bhatani-rakaumbwa bhatani rinotibvumira kuti tivhare ese kamwechete.
Kiinura manotsi paICloud.com
MuICloud.com isu tinazvo zviri nyore, uye ndizvo paApple suite webhusaiti hatizokwanise kukiya manotsi, isu tinokwanisa chete kuvhura iwo. Ndokunge, hatigone kugadzira zvinyorwa nekuzvikiya, asi tinogona kuvhura manotsi akagadzirwa kare. Maitiro acho akanyatso fanika seManotsi eOS X, iwo mavara ekuti tsamba iyi yakavharirwa ichaonekwa, isu tinopinda kodhi uye ese achavhura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvharira zvirevo muApp Notes
Tora Zuva Rekutanga 2.0 yemahara nekuda kwekushandisa kweApple Chitoro
Shazam inogamuchira iyo nyowani Apple Music muIOS 9.3